Hobolada Waaberi - Gpedia, Your Encyclopedia
cod, gitaar, kaban, Turunbo
1960kii ilaa 1990meeyihi
Hibo Nuura, Xasan Aadan Samatar, Magool, Maryan Mursal
Waaberi (Af-Soomaali: 'Hobolada Waaberi', Af carabi: وابري) waxay ahaayeen koox hobolo, fanaaniin, heesaa, majaajilo, ruwaayado, iyo bandhigyo faneed ku caan ahaa oo u dhashay wadanka Soomaaliya. Hobolada Waaberi waxay wax ku soo bandhigi jireen Af Soomaali, Carabi iyo Ingiriis, waloow ay Af Soomaaliga u badnaayeen.
2 Fanaaniinta Caanka ah
4 Linkiyo Banaanka
Hobolada Waaberi waxay ahaayeen koox ka tirsan xubnaha Fanka Soomaalida kuwaasi oo ka koobnaa abwaano, halabuur, curiyeyaal, qoraa, fanaaniin, muusikyahano, majaajileystayaal iyo qeybo kale oo badan. Hobolada Waaberi waxay soo baxeen badhtamihii 1970kii, waxay wakhti yar ku noqdeen hormuudka fanka.
Fanaaniinta Caanka ah
Hobolada Waaberi waxaa ku jiray qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan gayiga Soomaaladi, kuwaasi waxaa ka mid ahaa:
Xaliimo Khaliif Magool
tixaha heeso badan
tixaha heeso qaaci, qaraami iyo kuwo cusub
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hobolada_Waaberi&oldid=167540"